Bien Aparecida को अभयारण्य हेर्नुहोस् यात्रा समाचार
तपाईलाई जस्तो लाग्छ? क्यान्टाब्रिया भ्रमण गर्नुहोस् वा तपाईं स्पेनको यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाई धेरै क्याथोलिक हुनुहुन्छ र तपाईलाई कुमारीहरू र उनीहरूको अभयारण्य धेरै मन पर्छ? त्यसैले म तपाईंलाई भन्छु कि यहाँ स्पेनमा, क्यान्ट्याब्रिया क्षेत्रको, तपाईंले फोटोमा देख्नुहुने यस अभयारण्य लुकाइएको छ: भर्जिन डे ला बिएन अपारेसिडाको अभयारण्य।
क्यान्टाब्रिया एउटा सुन्दर भूमि हो, बास्क कन्ट्री, अस्टुरियस, क्यान्ट्याब्रियन सागर र क्यास्टिला वाई लियोनको बीचमा, त्यसैले तपाईं यस ठाउँको उत्तम ठाउँको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ जुन धार्मिक अभयारण्यबाट अलि हिंड्ने ठाउँमा समावेश छ।
1 बिन अपारेसिडाको भर्जिन
2 भर्जिन डे ला बिएन अपरेसिदाको अभयारण्य भ्रमण गर्नुहोस्
बिन अपारेसिडाको भर्जिन
धार्मिक मन्दिरहरू प्राय: जसो सम्मानमा निर्माण गरिन्छ कुमारीहरु र सन्तहरुको apparitions र यस अवस्थामा यो सानो देखिन्छ १ 1605० the मा भर्जिनको छवि गोठालो बच्चाहरूको समूहको अगाडि। करिब २० सेन्टिमिटरको तस्वीर केवल हर्मिटेजको विन्डोमा देखा पर्‍यो जुन त्यतिबेला सान मार्कोसलाई समर्पित अल्टो डे मार्रिनमा थियो। पछि यो भर्जिनको लागि उत्तम आश्रय स्थल बनाउने निर्णय गरियो।
आज फिगर एक हो आकार २१..21 सेन्टीमिटरको प्याडेस्टल सहित र नरम वार्निश जसले यसलाई कभर गर्दछ। यो स्पेनमा सबै धार्मिक छविहरूमध्ये सबैभन्दा सानो हुनुपर्दछ। यसको पछाडि समतल छ र अगाडि यसलाई काटिएको छ। उनको आवरण असाध्यै भर्जिनले उनको दाहिने हातमा जम्मा गरेको छ र लुगा केही निलोसँग सुनहरा छ। एल निन्यो, आफ्नो अंशको लागि, एउटा म्याट रंगमा पहिरिएको छ।
सच्चाइ यो हो कसैले पनि नक्काशी गर्ने लेखकलाई चिन्दैनन् र यो बनाएको मिति पनि हो वास्तवमा यो पन्ध्रौं शताब्दी भन्दा पुरानो छैन। भाग्यशाली समय को लागी एक डेन्ट बनाएको छैन र यो सुन्दर छ। भर्जिनको तस्विर क्यान्टाब्रियनहरू (सामान्यतया पर्वतारोहण पनि भनिन्छ) द्वारा अपनाइएको थियो संरक्षक सन्त, पहिलो अनधिकृत रूपमा, र त्यसपछि आधिकारिक रूपमा अठारहौं शताब्दी को दोस्रो आधा तिर।
उसको बिदाइ सेप्टेम्बर १ 15 हो र पक्कै पनि हजारौं मानिस मन्दिरमा आउँछन्।
भर्जिन डे ला बिएन अपरेसिदाको अभयारण्य भ्रमण गर्नुहोस्
अभयारण्य होaपुनर्जागरण र बारोक शैली निर्माण यो १teen औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो तर यो शताब्दीको सुरूमा पूरा भएको थियो। एक हो साधारण चर्च र एकदम austere, एक एकल नेभ र एक ल्याटिन क्रस को आकार मा एक बिरुवा संग। यस चर्चको एउटा भाँडो छ जसलाई तीन भोल्ट खण्डहरूमा विभाजित गरिएको छ जसमा तारिक आकारको रिबिंग हुन्छ जुन गोथिक स्टाइल स्ट्राप्स र टेरेलेट्स हो। फेकडमा हाइलाइट गरिएको पोर्टिको छ र ढोकामा अर्धवृत्ताकार आर्च छ। यो क्रसको साथ एक csp द्वारा समाप्त छ।
तिनीहरूको पक्ष को लागी सुरुचिपूर्ण वेदीपिसहरू जसको लागि यो शताब्दीको मिति पनि परिचित छ र अभयारण्यको मूल्यवान सम्पत्ति हो: यो लगभग छ Churrigueresque वेदीपीसहरू र यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा सबैभन्दा पूर्ण सेट हो। तिनीहरू सिएटे भिल्ला कार्यशालाका शिक्षकहरूले बनाएका थिए।
मुख्य वेदपीस १ 1734 को हो र राइमुन्डो मेयरको हस्ताक्षर रहेको छ, पत्रको सेन्ट सेंट जोसेफ र सेप्ट जर्जटूडलाई सुसमाचारको नाभिको लागि समर्पित छ। र यो मुख्य वेदपीसको मध्य गल्लीमा छ जुन भर्जिन डे ला बिएन अपारेसिडाको गोथिक नक्काशी भेट्टाइन्छ।
तपाईं अभयारण्यमा कसरी पुग्नुहुन्छ? पहिलो यो अभयारण्य होज दे मरिन शहरमा छ२००aमा केवल 2008२ जना बसोबास गर्ने सानो शहर। यदि तपाईं क्यान्ट्याब्रियाको राजधानी सान्तान्डरमा हुनुहुन्छ भने तपाईंले शहरबाट केवल 62 55 किलोमिटर मात्र र अभयारण्यबाट केवल चार किलोमिटर टाढाको सानो नगरपालिका एम्पुरो जानु पर्छ। एम्पुएरो शहरबाट त्यहाँ पुग्न सजिलो छ किनकि तपाईं उडला रोड लिनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईंलाई एक बिन्दुमा एक डिउउर देख्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई चर्चमा लैजान्छ।
परम्परागत कुरा भनेको १ of पाइलाहरू हिडेर पवित्रस्थानमा पुग्नु हो जुन ख्रीष्टको उत्साहलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, यद्यपि यो पन्ध्र किलोमीटर र माथिको हो। एक पटकको चर्चमा त्यहाँ ठूलो संख्यामा र तीर्थयात्रा हुन्छ, छुट्टीको दिन, अवश्य पनि, र साथै रंगीन बजार पनि छ जुन क्षेत्रीय पर्यटक चासोको उत्सव घोषित गरिएको छ। क्षेत्र सुन्दर छ त्यसैले किन मैले तपाईंलाई सुरुमा भनेको थिए कि तपाईंले चारैतिर घुम्न वा भ्रमण गर्नुपर्छ।
यदि तपाईं धेरै धार्मिक हुनुहुन्न र यो अभयारण्य र को पार्टीहरू र बजारहरू सम्बन्धित, तपाइँ भ्रमणको दृश्य परिवर्तन गर्न र ऐतिहासिक बनाउन सक्नुहुनेछ - सामाजिक अवलोकन। सत्य यो हो कि शताब्दीयौंदेखि यो कुमारीहरू र सन्तहरूको apparitions को वा एक अवशेष (एक हड्डी वा एक संत को अंश) को स्वामित्व राखिएको थियो, अभयारण्य निर्माण गर्न पार्टीहरू, बजार र तीर्थयात्राहरू व्यवस्थित गर्न को बहानाको रूपमा काम गर्‍यो जसले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्‍यो। पैसा छोड्छ धेरै समुदायहरूको लागि यो एक ठूलो व्यवसाय थियो, शुद्ध धार्मिक पक्ष बाहेक।
र यदि तपाइँ प्रकृति मात्र मनपराउँछन् भने तपाइँले त्यो याद गर्नुपर्दछ क्यान्ट्याब्रिया एक सुन्दर क्षेत्र हो साँच्चै र त्यो यहाँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ ग्रामीण पर्यटन ठूलठूला ठाउँमा बस्दै, धेरै नै स्वादिलो ​​गेस्ट्रोनोमी खाएर आराम, आराम र आराम गर्दै।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » Bien Aparecida को अभयारण्य भ्रमण गर्नुहोस्
Patios de Cordoba, मानवता को अमूर्त विरासत